wikiHow:Somali wikiHow Project/Sida Loo Noqdo Tarjume - wikiHow
wikiHow:Somali wikiHow Project/Sida Loo Noqdo Tarjume
Inaad noqotid turjumaan waxay u baahan tahay tababbar, xirfado iyo dulqaad xaggaaga ah.
Xusuusnow, turjumaannada way qoraan, af-celiyeyaashana way hadlan. Kuwani waa talooyin kaa caawinaya inaad noqotid tarjumaan.
Baro hal luuqad qalaad, labo ama ka badan! Haddaadan luqadda si fiican ugu hadlin, waa inaad baratid. Si aad u ogaatid heerka aad rabtid inaad ka gaartid luqadda, waxaad rabi lahayd inaad mar waliba la kulantid eray cusub in aan ka badneyn sidaad uga heshid luqaddaada hooyo. Si aad u guleysatid, hal luuqad qalaad oo kaliya kuuguma filna. Waxaad xaqiijisaa inaad isku carbisid luqadaha aad ku hadashid mar walbaad awoodid adigoo akhrisanaya, filimaanta iyo telefishinka fiirsanaya, suugaanta dhageysanaya, dadka luqadda ku hadlana la saaxiibaya, iyo adigoo safraya iyo wixi la mid ah..
Luqaddaada hooyo si fiican u xaji. Turjumaannada badanaa waxaa laga filayaa inay luqaddooda hooyo wax ubaddalaan waayo waa luqadda ay sida ugu fiican aragtidooda ugu gudbin karaan. Si aad taa u sameysid, noqo akhriye wacan, qoraa iyo mid ku hadla – luqaddaada hooyo ka dhigo hooy.
Wax baro. Waxaad raadsataa shahaadada cilmiga afcelinta iyo turjumidda, isbarbar-dhigidda maansada, ama xiriirka u dhexeeya dhaqamada; kadibna waxaad qaadataa imtixaannada aad u maleyneyso inaad u baahan tahay, taasoo ku xiran meesha aad ka shaqeyn rabtid, tusaale ahaan imtixaanka EPSO haddaad rabtid inaad Midowga Yurub u shaqeysid.
Tababar samee khibradna yeelo. Jaamacadaha badanaa (ama kulligoodba) waxay barnaamijka waxbarashada ku daraan shaqo-barasho oo khasab ah. Haddii aysan taadu lahayn, hab kale isku day. Shaqo-barasho waxaad la yeelataa urur ama xafiis turjumaad, xataa waxaad weydisaa macallimiintaada qaarkood oo ah turjumaanno, waxay kuu oggolaan karaan inaad u shaqeyso adigoo wax baranaya.
Ogow ujeeddadaada. Go'aanso waxaad rabtid inaad sameysid. Ma rabtaa inaad turjuntid buugta maansada? Inaad turjumaan ka noqotid urur weyn? Inaad iskaa u shaqeysatid? Go'aan qaado..
Tarjumaadda billaw markaad waxbarashada ka gudubtid. Tani waxay ku xiran tahay nooca turjumaanka aad noqon rabtid. Haddaad rabtid inaad turjuntid buugaag, shaqo ka dalbo madbacad. Haddaad urur u shaqeyn rabtid, mid raadi shaqana ka dalbo, waana fikrad wacan inaad shaqo-barasho u aaddid ururka intaan qalinjabin, firfircooni ayey kuugu arki karaan shaqana way ku siin. Haddaad rabtid inaad iskaa u shaqaysatid, macaamiil raadso
Noqo qof saameyn leh. Hawsha si dhakhsa ah u fuli, adeegyadaadana qiimo macquul ah u samee waxaadna soo saartaa tarjumaad tayo sare leh. Sidoo kale qof xisaabtama noqo oo ha oggolaanin shaqooyin aadan u qalmin oo aqoon aadan ulahayn, hana qaadan shaqooyin badan isku waqti. Ma rabtid in laguugu xasuusto inaadan hawlaha ku dhammeynin muddada laguu qoondeeyey..
Ku hadal oo akhriso luqadahaaga mar walbaad awoodid.
Tababar ahaan, waxaad fasirtaa bogagga Wikipedia.
Qoraallada wikiHow u baddal luuqado kale. Taasi adigu iyo akhristayaasha wikiHow-gaba way idin caawin.
Waxaad ka war qabtaa erayada dhaqanka, midabbada, iyo waxyaalaha kale ee luuqadahaaga. Tusaale ahaan Faransiiska, ha fiirin un lahjada looga hadlo dalka Faransiiska oo kaliya, ee waxaad fiirisaa lahjadaha Kebeek (Kanada), Niyuu Branswik (Kanada), Biljamka. Swiiska, Luwisiyana (Mareykanka), Aljeeriya iyo wixi la mid ah.
Shaqada tarjumaadda waxay u baahan tahay dad firfircoon oo laysku halleyn karo.
Español: convertirte en traductor, Italiano: Diventare un Traduttore